Microsoft inoenderera kubhadharisa patent yekurwisa Linux | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft inoita kunge yakayananiswa neLinux, vakashandisa iyo sisitimu yezvimwe zvezvigadzirwa zvavo, vakaisanganisa mukati megore, vakabatsira kuLinux Foundation, takaona zvirongwa zvakaiswa pachikuva chepenguin, nezvimwewo, asi kubva kumashure vanoenderera hunyengeri hwavo kupokana neyemahara uye Linux software. Saka harusi rudo sezvarwunoita, asi zvingangodaidzwa kuti kufarira ...
Uchapupu hweizvi ndehwuchiri vanoramba vachibhadharisa patents izvo zvinokanganisa iyo GNU / Linux nyika uye masisitimu senge Android. Isu takatotaura kare kuti Microsoft yauya kuzowana mari yakawanda patent yainotora kubva kumadivaysi eApple pane ayo Windows Mobile inoshanda sisitimu, iyo yanga iri kutadza kwakazara uye kwakakwana. Asi chokwadi ndechekuti havasi ivo chete maratidzi kwavari kubatsirikana.
Maka Shuttleworth, Canonical, anga aine mazwi makukutu neMicrosoft senge «Uku ndiko kupamba uye kunofanira kunzi chii»Kana vamwe vakaita sa«Microsoft iri kukumbira vanhu kuti vabhadhare zvibvumirano, asi ini handisi kuzotaura kuti ndeapi. Kana mukomana akapinda muchitoro oti, 'Inzvimbo ine hukasha, wadii kundibhadharira madhora makumi maviri uye ndichaita shuwa,' izvo hazvisi pamutemo. Imhosva yakarongeka«. Nemashoko akaomarara aya Mark anopomera Microsoft.
Microsoft iri kugadzira mamiriro ekunze ane hukasha uye kuunganidza zvine hukasha nemvumo, chimwe chinhu chine chekuita nerusununguko uye makwikwi emahara. Vazhinji vanoti iko kubiridzira uye kunokanganisa zvakananga GNU, Linux, Chrome, Android nevamwe yemahara software ... Saka rudo rwakaputirwa nezviito zvisina hunhu uye zvehunhu zvinongova nemhedziso imwe chete, zvakafanana neyakagara: MARI.
KUFUNGWA: Microsoft inoda mutero weLinux patent.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Microsoft inoenderera kubhadharisa patent yekurwisa Linux
Alexis Roma akadaro
Nemutengo upi Mark Shuttleworth anopa chikumbiro kuMicrosoft, kana "kambani" yake ikashandisa GNU / Linux pasina kupa zvishoma kana chero chinhu kudzosera.
Pindura kuna Alexis Roma
Munhu wausingazive nezve zvipo zveCanonical hazvireve kuti ivo havapo ... Inoshanda yemahara sisitimu inonzi ubuntu kurira kwauri? Nenzira yekushandisa linux?
Pasina kutaura nezve zvipo zvake zvenguva dzose kune iyo kernel, iyo Unity desktop nharaunda, upstart, bazaar, iyo PPA system uye yakareba etcetera ...
Kutaura nekuda kwekutaura usingazive zviri kutaurwa.
Ini ndinofunga vangangoita tese tinoshandisa GNU / Linux. Ndinoishandisa pamba nepabasa uye ini handibhadhare, uye handizive maitiro ekuronga. Mark S. ane kambani, uye makambani anofanirwa kupa mari yekuzviriritira, zvirinani ivo vanopa chikamu chakanaka chekodhi iyo yavanoronga uye kubva kune iyo / ini vamwe ndiri kubatsirwa, sekapu. Ini ndinotenda kuti iyo GNU uzivi hunosanganisirawo Canonical, iyo inobhadharisa masevhisi, asi izvo zvaisingasanganisi iri kubhadharisa liléncias yezvinhu senge kushandisa mafuta zvikamu, kupa muenzaniso unoenderana.
Gerardo Castillo akadaro
Pindura Gerardo Castillo
Urwu rudo rweMS runondiyeuchidza nezve zvakataurwa nema psychopaths: "Ndakavauraya nekuda kwerudo."
Carlos Catano akadaro
tisingarevi kuti vakatumira maCD mahara zvachose kupi zvako pasi pano…. nguva pfupi yadarika kune uyo anovenga ubuntu uyo ​​anongoshanda kuve anonyanyisa.
Pindura Carlos Cataño
Microsoft, sei usingabude?
Handina kumbobvira ndatenda kune iyo inofungidzirwa rudo
Pindura kuna jbmondeja
Jose orrego akadaro
Ini ndinotenda kuti iyo hondo inofanirwa kupihwa nesu tese avo neimwe nzira kana imwe vanoshandisa uye vanobatsirika kubva kuLinux, uye ini ndinozvitsanangura ndoga: kana mumwe nemumwe wedu akatsanangurira kanenge gumi kana makumi maviri vanhu kuti zvakanaka uye zvinobatsira sei kuchinja kuLinux kukuvadza Windows, isu tinogona kutanga kukwirisa chiyero. Kune yangu chikamu ini ndakakwanisa kugonesa vanhu makumi matatu kubva kumhuri yangu nenzvimbo yebasa nezvezvakanakira izvi uye ndakakwanisa kuita kuti vanhu ava vachinjire kuLinux mune avo akasiyana maDistros.
Pindura kuna Jose Orrego
Juan Diaz akadaro
Uye ivo vanoramba vachitaura newe?
Pindura Juan Diaz